Iva FAQs - SiChuan XiangYue Power Line Zvikamu Co., Ltd.
Sei uchisarudza kambani yako?
Kutanga vanhu.Isu tiri timu yehunyanzvi uye boka revanjiniya vane ruzivo muindasitiri iyi.Mukuru wedu akawana dhigirii rake kuUK izvo zvinounza kambani iyi muono wepasirese kupfuura vamwe vanogadzira shongwe.Chechipiri ibasa, kune ichi chigadzirwa, mugadziri uye vatengi vanofanirwa kukurukura akawanda ehunyanzvi ruzivo.Isu tinogara nemoyo murefu kubvunza chero mubvunzo uye kupa mazano edu ehunyanzvi kune vatengi.Chekupedzisira asi chisiri chidiki, tinokoshesa mhando zvakanyanya.Zvese zvinodikanwa zvevatengi zvinosangana uye tinozvipira kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vese vatengi vedu.
Yakawanda sei shongwe?
Mutengo unoenderana nemhando yeshongwe dzaunoda.Kune akasiyana shongwe mhando, iyo mbishi inogona kunge yakasiyana uye yekugadzira yeimwe shongwe yemhando inogona kunge yakaoma kupfuura mamwe.Ndosaka tichida kuona kudhirowa kwevatengi tobva tapa kotesheni.
Ko kana ndisina mufananidzo?
Kana vatengi vasina kudhirowa, tinogona kupa akawanda akagadzirwa shongwe mhando kuti vatengi vasarudzwe.Muzviitiko zvakawanda, tinogona kupa shongwe mhando yekudhirowa kuti isangane nezvinodiwa nevatengi.Kana iyo yekufambisa tambo yakaoma, isu tichiri kupa dhizaini sevhisi kune vatengi vedu.
chii chinonzi minimum order?
Hatina hudiki hweodha uye tinobvuma chero odha kubva kune vatengi.
Kugadzirwa kwenguva yakareba sei?
Kazhinji tinogona kuita kutumira kwekutanga mumwedzi mumwe chete.Nguva yekugadzira inonyatsoenderana kuti ingani shongwe dzaunoda.
Zuva rekutumira rakareba sei?
Nguva yekuendesa kuEurope, Africa neAmerica kondinendi inenge mazuva makumi mana.Kumatunhu eASEN, nguva yekutumira inenge mazuva makumi matatu.Kazhinji kutaura, nguva yekuendesa ichave yakareba kupfuura mwedzi mumwe.
Mutengi anogona here kuongorora zvigadzirwa zvavo zvisati zvatumirwa?
Ehe saizvozvo.Mutengi anogona kuongorora zvigadzirwa zvavo chero nguva yavanoda.Chaizvoizvo, isu tinogamuchirwa kwazvo vatengi kushanyira fekitori yedu uye kuongorora zvigadzirwa zvavo zvisati zvatumirwa.Isu tichapa 3 vatengi 3 mazuva ekugara.Vatungamiri vachaita musangano nevatengi vanotishanyira.Chero kuongororwa kwezvinhu izvo zvinodiwa nemutengi zvichatorwa.
Ndeipi mutemo wako mushure mekutengesa?
Kazhinji kutaura, tichapa chero sevhisi yatinogona kubatsira vatengi kudzamara shongwe dzaungana zvakanaka.
nguva yako yekubhadhara ndeipi?
Kazhinji tinobvuma T/T uye L/C, 30% pachine nguva.